Barcelona Oo Kula Tartameysa Arsenal Saxiixa Renato Sanches.
HomeWararka CiyaarahaBarcelona oo kula tartameysa Arsenal saxiixa Renato Sanches.
January 6, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Barcelona ayaa lagu soo waramayaa inay qorsheyneyso inay u dhaqaaqdo ciyaaryahanka khadka dhexe ee Lille ee Renato Sanches .
24-sano jirkaan ayaa si xoogan loola xiriirinayay inuu ka tagayo kooxdiisa Ligue 1 inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagan, laakiin waqtigii ugu dambeeyay ayaa dhaaftay xiddiga heerka caalami ee dalka Portugal oo weli ku sugan France.
Sanches ayaa kaliya 18 bilood uga harsan tahay inuu qandaraaskiisa haatan ku sii socdo, waxaana si weyn loo filayaa inuu u dhaqaaqo sanadkan, iyadoo Arsenal loo maleynayo inay hormuud u tahay saxiixiisa.
Si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xigtay ELEVEN , waxaa sidoo kale jira xiiso weyn oo ka imaanaya Barcelona, ​​kuwaas oo u aqoonsaday Saxiixa xidigan mid muhiim ah.
Tababaraha kooxda Catalan Xavi ayaa la sheegay inuu go’aansaday inuu hagaajiyo khadkiisa dhexe ee ololaha 2022-23, iyadoo Sanches loo aqoonsaday inuu yahay iibka ugu fiican sababtoo ah helitaankiisa.
Da’yarkii hore ee Benfica ayaa dhaliyay lix gool waxana loo diwangeliyay lix caawiye 76 kulan oo uu u saftay Lille tan iyo markii uu Ligue 1 kaga soo biiray Bayern Munich 2019.